मापदण्डविपरीत पशु ढुवानी गर्ने ३६ ओटा सवारी कारवाहीमा
२०७८ बैशाख, २
वैशाख २, चितवन । चितवनमा मापदण्डविपरीत पशु ढुवानी गर्ने ३६ ओटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म ३६ सवारी साधनले मापदण्डविपरीत पशु ढुवानी गरेको पशु क्वारेन्टाइन चेक पोष्ट रामनगर चितवनका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार चालू आव २०७७/०७८ को भदौमा चार, असोजमा आठ, कात्तिकमा दुई, मंसिरमा दुई, पुसमा नौ, माघमा पाँच र फागुनमा ६ ओटा सवारी साधन कारवाहीमा परेका छन् ।
मापदण्डविपरीत ढुवानी गर्ने व्यक्ति वा फार्मलाई दण्ड वा जरिवाना गरेवापत चालू आवको हालसम्म रू. ६३ हजार ५०० राजस्व संकलन गरिएको पौडेलले जानकारी दिए ।
क्षमताभन्दा बढी पशु ढुवानी गर्नु, नाक मुख बाँधेर पशु ओसारपसार गर्नु, चेकपोष्टमा दरपिट नगरी आउनु, पशु चिकित्सकद्वारा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र नलिई आउनुलगायतका कुरालाई पशु ढुवानी मापदण्डविपरीत मानिन्छ ।
पशुलाई ढुवानी गर्दा हलचल गर्न मिल्ने, घाउचोट नलाग्ने, अत्यधिक चिसो वा तातोबाट बचाई, एकापसमा ठोक्किएर अंगभंग नहुने गरी सावधानीपूर्वक ढुवानी गर्नुपर्नेलगायतका कुरा मापदण्डमा उल्लेख छ ।
डा पौडेलका अनुसार पशु चिकित्सकसँग पशु स्वास्थ्य जाँच गराएको प्रमाणपत्रको अवधि ७२ घण्टा नाघेको हुुनुहुँदैन । स्वास्थ्य जाँच नगरिकन पशु ढुवानी गर्ने अहिलेसम्म नपाइएको बताउँदै डा पौडेलले यदि स्वास्थ्य जाँचविपरीत आएको खण्डमा पशुपक्षी अन्वेषण प्रयोगशाला, भरतपुरमा पठाएर जाँच गर्न लगाइने बताए । चल्लाको हकमा बिक्री अनुमतिपत्रको आधारमा ढुवानी गर्न दिइने गरेको उनले बताए ।
पशु चिकित्सक डा पौडेलका अनुसार एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेश गराउँदा पशु स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । जाँच गरिएको प्रमाणपत्र देखाउन चितवन जिल्ला प्रवेश गरेका सबै पशुपक्षी ढुवानी गरेका सवारी रामनगर पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।
पश्चिमबाट पूर्व लैजान खोजिएका तथा पूर्वबाट पश्चिम लैजान खोजिएका पशु ढुवानी गरेका सवारीले चितवन आएपछि रामनगर लगेर प्रमाणपत्र देखाई दरपिट गर्नुपर्ने हुन्छ । पशु क्वारेन्टाइन जाँच गर्ने चौकीको नै देशमा कमी छ । चितवनबाट नजिक रहेका अरु पशु क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट पूर्वतर्फ बाराको पथलैया, पश्चिममा दाङको भालुवाङ र काठमाडौंको नागढुंगा हुन् ।
काठमाडौं लैजान लागिएको हकमा रामनगरमा जाँच भएपछि पुनः नागढुंगामा जाँच गरिन्छ । पोखरा लैजान लागिएको हकमा भने रामनगर नै अन्तिम जाँचस्थल हो । हरेक हप्ता तराईमा आयोजना हुने पशुमेला, हटिया, हाटबजारबाट खरीद गरिएका राँगा–भैँसी राजधानीलगायतका शहरमा ढुवानी गरिन्छ । यस्तै विभिन्न स्थानबाट खसीबोकासहित विभिन्न पशुपक्षीको ढुवानी हुने गर्दछ । रासस
अक्सिजन सिलिण्डर जम्मा गर्दै उद्योग संघ चितवन [२०७८ बैशाख, २५]
निषेधाज्ञाका कारण चितवनमा आधा मूल्यमा पनि दूध विक्री भएन [२०७८ बैशाख, २५]
चितवनमा ८६ जना चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण[२०७८ बैशाख, २५]
६ गुणाबढी भाडा लिने सवारी साधन कारवाहीमा[२०७८ बैशाख, २४]
निषेधाज्ञाका कारण बैंकहरूमा सेवाग्राहीको चाप घट्यो[२०७८ बैशाख, २३]
बुक बिल्डिङ भनेको के हो ? (अर्काइभबाट)
अस्पतालमा तत्काल अक्सिजन आपूर्ति गर : कांग्रेस
दोगडाकेदार गाउँपालिकाले सबै सवारी साधन कोभिडका विरामी बोक्न प्रयोग गर्ने
तस्वीर : एकान्तकुनास्थित चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षण केन्द्र